Wadahadal ballaaran oo heer qaran ah: "MRC kuma aysan amrin qofna inuu qabto booskiisa warbaahinta", Sosthène Médard Lipot - TELES RELAY
ACCUEIL » kale »Wadahadalka Grand National:« MRC uma aysan amrin qof inuu qabto booskiisa warbaahinta ", Sosthène Médard Lipot
Wadahadal ballaaran oo heer qaran ah: "MRC kuma aysan amrin qofna inuu qabto booskiisa warbaahinta", Sosthène Médard Lipot
Siyaasiga ayaa ku doodaya in codkiisa kaliya loo oggol yahay gudaha xisbiga dhexdiisa xagga isgaarsiinta siyaasadeed, kadib tii madaxweyne Maurice Kamto.
Sosthène Médard Lipot wuxuu doonayaa inuu caddeeyo, MRC wali go'aan kama aysan gaarin "Wadahadal heer qaran ah" waxaa isugu yeedhay Paul Biya. Qaab dhismeedka xisbigani wuxuu qeexayaa in dhammaan kuwa marsiiyay qalabka warbaahinta ilaa iyo hadda ku hadla magaca MRC ay yihiin oo keliya "Sharci darro".
Sosthène Médard Lipot wuxuu ku sugnaa ABK subaxnimadi, raadiye gaar loo leeyahay oo laga sii daayay Douala, oo ah caasimada dhaqaalaha. Xoghayaha Isgaarsiinta Qaranka ee MRC, ayaa mar kale cadho ka muujiyay warbaahinta qaar oo uu sheegay inay cod siisay "Sharci darro" inuu ku hadlo magaca MRC kadib khudbadii madaxwaynaha Talaadadii lasoo dhaafay.
Siyaasiga ayaa sidoo kale yiri " booska rasmiga ah ee MRC waxaa lagu ogaan doonaa saacadaha soo socda (ama) maalmaha soo socda ". Waxa uu sheegay in waxa ilaa hada laga sheegay magaca xisbiga ay yihiin Waa waxba kama jiraan ". " MRC cidna kuma ay amrin qofka inuu qabto jagadiisa Wuxuu ku adkaystay.
Sosthène Médard Lipot wuxuu sharraxay in xisbigu u fiirsaday wixii dhacay wuxuuna xasuusiyay in madaxweyne Maurice Kamto uu had iyo jeer u ololeeyo wadahadal ku saabsan xiisadda ka jirta gobollada ku hadla Ingiriisiga. " Si guul iyo mas'uuliyad leh, MRC waxay ku guuleysatey guul ka gaartid ikhtiyaarka kalsoonida ee nidaamka sharci-darrada ah "wuu ku farxay.
Paul Biya, khudbadiisii ​​aad loo filayay ee uu u qabtay umadda Talaadadii la soo dhaafay, wuxuu ku dhawaaqay shirweynaha dhammaadka Sebtember ee a Wadahadal heer qaran ah Ku saabsan dhibaatada ba'an ee ka jirta gobollada Waqooyi Galbeed iyo Koonfur Galbeed ee Cameroon.
Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sheegay in wada hadalkan uu gudoomin doono ra’iisal wasaare Joseph Dion Nguté, isla markaana ay isugu imaan doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada. Dhowr xisbi siyaasadeed ayaa horey u hadlay.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore 237 ACTU
Barakacayaashu waxay soo dhoweynayaan dadaalka nabadeed
Hogaamiyaasha fikraduhu waxay ku iibsadaan balanqaadka nabada ee Madaxweynaha iyadoo loo marayo Wadahadalka Qaranka